IShedi yeeTin, eSpeyside - I-Airbnb
IShedi yeeTin, eSpeyside
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguRoss
Imiswe kwiGlen Isla entle kumbindi weSpeyside, iTin Shed yindlu entle ekhazimlayo eyakhiwe ngendlela yeentaba zombini ezipepile iinduli.
I-Tin Shed kukuhamba nje okufutshane ukuya kunxweme lwaseMoray kunye neelwandle zayo ezintle. Iinqaba, ukuhamba okukhulu kunye nangaphezulu kwe-40 ye-whisky distilleries ngaphakathi kwemizuzu engama-30 yokuqhuba. Ummandla wendawo uyindawo emangalisayo yokubukela izilwanyana zasendle kunye ne-squirrels ebomvu, i-red deer, i-pine martens, i-osprey kunye ne-dolphin yinto eqhelekileyo. Enye inja eziphethe kakuhle yamkelekile.
I-Tin Shed yakhiwe ngendlela yeentaba zaseSkotlani zakudala kodwa xa sele ingaphakathi ukufana kuyanyamalala! Kwiinyanga ezibandayo isitovu seenkuni esigqumayo siya kubulisa ukufika kwakho kwaye siya kukugcina upholile kwaye sikupheke ukutya kwakho ngexesha lokuhlala kwakho. I-Tin Shed ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo xa upheka kwaye utye kwaye inegumbi lokuhlambela elitofotofo leen-suite elineshawa eshushu kunye nezinto eziluncedo zale mihla.
Ngaphandle kukho itafile yepikiniki, i-BBQ kunye nomgodi womlilo obekwe kwigadi yeziqhamo enemibono ngaphandle kwelizwe elijikelezileyo kunye ne-millpond eyayikade yondla ilitye lakudala lamanzi kwindawo.
I-WiFi, ilinen yokulala, iitawuli kunye nebhaskithi yomthi ngosuku zonke zinikezelwa simahla.
I-Tin Shed ingqongwe ngamasimi athi ngamaxesha ahlukeneyo onyaka azele ziigusha, iinkomo okanye imalting barley. Umzila kaloliwe weediliya ubaleka kwintlambo engezantsi kwaye unokukhwela uloliwe osuka kwindawo ‘yokumisa’, umgama wemizuzu emihlanu ukusuka kumnyango wakho.
I-Speyside idume ngokuvelisa eyona whiskey ibalaseleyo emhlabeni kwaye yonwabela imozulu entle eyomileyo (ish!!) ngenxa yomqobo wemvula wendalo weCairngorm Mountains National Park emazantsi. Lo mmandla utyebile kwimbali kunye neenqaba zasemoyeni, iisayithi zePictish kunye namabala edabi amandulo. Yiparadesi yabadlali bezemidlalo enayo yonke incasa elungiselelwe ukusuka ekudubuleni kunye nokukhwela ibhayisekile ukuya kwi-surfing kunye nokutyibiliza. Umlambo okufutshane waseSpey utsala abalobi abavela kwihlabathi liphela, abanomdla wokufaka isalmon yasendle yaseSkotlani yokwenyani. Kodwa umtsalane wethu esiwuthandayo ziikhilomitha kunye neekhilomitha zamalwandle angenanto apho sihlala sibona amahlengesi kwaye ayonwabisa kanye ngemini yasebusika enelanga.
Iivenkile ezikufutshane kunye neevenkile ezinkulu zikwidolophu encinci yaseKeith, ekwiikhilomitha ezintlanu. Iivenkile ezinomdla zakudala kunye neevenkile zobugcisa zijikeleze i-20 imizuzu kude.
Ababuki zindwendwe bakho, uEleanor kunye noRoss bakhona ukuze bacebise ezona lwandle zibalaseleyo, iidistilleries, iindawo zokuhamba, iindawo zokutya kunye nohambo lwemini. Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo!!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moray